Promotions - Academy Gold Shop
ရွှေရောင် စီးပွား ကျင့်ဝတ်များ
ရွှေစင်အကယ်ဒမီ ရတနာရွှေဆိုင် နှင့် မီးလင်းအခေါက်ရွှေ ရောင်းဝယ်ရေးမှ ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ "ရွှေရောင် စီးပွား ကျင့်ဝတ်များ" ဆိုတဲ့ ပွဲလေးကို (11.8.2019 - Sunday) Gandamar Grand Ballroom မှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်..
ယခုပွဲလေးအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁လကျော်ကတည်းက အချိန်ယူ စီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်..
ပွဲလေးဖြစ်မြောက်အောင် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..
ဦးစွာ ပထမ ရွှေစင်အကယ်ဒမီ ဖိုးဖိုးကြီး ဦးသူတော်ကို ကျေးဇူးတင် ဂါရဝပြုပါတယ်..
တက်ရောက်ချီးမြင့်ခဲ့ကြတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ နာယကကြီး ဘဘ ဦးဘသန်း၊ ဥက္ကဌကြီး ဘဘ ဦးမျိုးမြင့်၊ မကွေးတိုင်း ရွှေအသင်း ဥက္ကဌကြီး ဘဘ ဦးဇေယျနှင့်တကွ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများအား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..
ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်တဲ့ "ရွှေဈေးကွက်အကြောင်း အများပြည်သူ သိရှိနားလည်စေဖို့၊ ရှိသင့်ဖြစ်သင့်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ကျင့်ဝတ်များအကြောင်း၊ ယနေ့ခေတ် လူလတ်ပိုင်းများနှင့် လူငယ်များအတွက် စိတ်ဓာတ်တွေ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာဖို့" စသည်တို့ကို ထိထိမိမိ စေတနာပါပါ ပြောပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ ဆရာများ ဦးအောင်ကျော်ဝင်း၊ ဦးသူရထွန်း၊ ဦးရဲမာန်အောင်၊ ဦးညီညီ(စိတ်ပညာ)၊ ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ တို့ကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.. (ဆရာတွေအားလုံး အချိန်မအားကြတဲ့ကြားက တက်ရောက် ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတာပါ)..
ပွဲအတွက် ဒီဇိုင်းများနဲ့ ဓာတ်ပုံများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖန်တီးပေးတဲ့ ကိုကျော်လူလူမင်း (Spaces photo studio)နဲ့ အဖွဲ့သားများ၊ ပွဲချိန်အတွင်း အသံပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် ဝိုင်းစီစဉ်ကူညီပေးတဲ့ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်၊ ပွဲစလုပ်မယ် စဉ်းစားကတည်းက ကူညီပေးတဲ့ တိုင်ပင်ဖော် အစီအစဉ်ကြေငြာသူ မသိမ့်ရည်အေး၊ ပွဲအတွက် အကြံဉာဏ်များပေးတဲ့ မမေသူဇော် စတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ရင်ထဲက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကျွန်မတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်များ ဆန္ဒများကို ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ မိသားစုဝင်များ ဆွေမျိုးများ ရဲဘော်ရဲဘက် ဝန်ထမ်းညီအကိုမောင်နှမများကိုလည်း အမြဲ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ..
အရာရာ စိတ်တိုင်းကျ စီစဉ်ပေးကြပါသော Gandamar Grand Ballroom အဖွဲ့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
မိုးများသည်းထန်စွာရွာပြီး ကားလမ်းတွေ ပိတ်နေတဲ့ကြားက အချိန်ပေး လာရောက် နားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကိုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...
မြန်မာ့ရွှေလောကအတွက်လည်း မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှ ကြိုးစားမြှင့်တင်သွားပါမည်..
ရတနာရွှေဆိုင် နှင့် မီးလင်းအခေါက်ရွှေ ရောင်းဝယ်ရေး မိသားစု
@ Closed Temporarily
@ 10:00am - 03:00pm
***We are close on every SUNDAY.
All Rights Reserved. © Copyright 2021 Academy Gold Shop.